Russia Inokurudzira Apple Kubvisa LinkedIn App Kubva kuRussia App Store | IPhone nhau
Russia inokurudzira Apple kubvisa LinkedIn app kubva kuRussia app chitoro
Kubva kutanga kwaZvita uye mushure mekurwa kwenguva refu zviri pamutemo pakati pekambani yeLinkedIn, izvozvi zviri mumaoko aMicrosoft, nehurumende yeRussia, kambani yakaona sevhisi yayo yakavharwa zvachose pasirese. Russia, senge China, iri kuita danho mumakore achangopfuura uye ivo vari kusimbisa nhevedzano yezvinodiwa kuitira kuti chero sevhisi, kunyanya yeAmerica, inoda kupa basa rayo munyika, ibate data rese revagari vayo pamaseva ari mu nyika. Zvakajeka, kunyangwe vasingazvitaure sezvazviri, kuti ivo vanoda kuve neruzivo padhuze kuti vakwanise kuuwana vasina kumbofungidzira.
Kwapera mwedzi mushure mekuvharira iyo LinkedIn sevhisi muRussia, hurumende yeRussia yakakumbira zvakare, aka hakasi kekutanga kuzviita mumwedzi wapfuura, kubviswa kweiyo LinkedIn app kubva kuApple app chitoro, chikumbiro chekuti kubvira kutanga kwaZvita, zuva iro basa risisipo, rakamira kushanda kuburikidza neyakajairika migero, asi zvingangove, hazvina kusimbiswa, kuti inogona kuwanikwa kuburikidza neVPN masevhisi. Google, seApple, yakagamuchirawo chikumbiro chimwe chete, chekuti iko kunyorerwe zvakare kubva kuchitoro chayo cheApple.
Mazuva mashoma akapfuura Apple yakabvumirana nechikumbiro chehurumende yeChinese, ane hukama naye mumakore achangopfuura haasisina hunyoro, kubvisa kunyorera kweThe New York Times bepanhau, nekuda kwekutyorwa kwemitemo yemuno. Webhusaiti yeiri pepanhau yakavharwa kubvira 2012, asi zvinoita sekunge kunyangwe iko kunyorera kuri muChinese App Chitoro kunogona kupfuura izvi zvisingagone kushandisa VPN, nekuti zvikasadaro hazvina musoro kuti hurumende inoda kubvisa iyo kubva kuApp Store yenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Russia inokurudzira Apple kubvisa LinkedIn app kubva kuRussia app chitoro
Kuverenga kwakadii kwemamiriro acho ezvinhu ... "nekuti Russia inoda kuve neiyo data padhuze kuti igone kuvawana ..." muchidimbu ... chingave chiri chokwadi, asi ini handifunge kana hurumende yangu ikaita zvakafanana , sezvo mumwe munhu achiwana data rangu, zvirinani kugara pamba, handiti? Izvi zvakafanana kuchengetedza, kudzivirira makambani ari muUS kuti ave nedata revagari vako.
David vazquez akadaro
Vashandisi veRussia vanozopedzisira vatendeukira kune zvisiri pamutemo zvitoro, nenjodzi dzinosanganisira izvi. Kuve imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo pasocial network uye mamiriro ekupokana pakati peRussia neUS, zvine musoro kuti Hurumende yeRussia inoramba ichiita zviito zvakadai.
Pindura David Vázquez
5 Mapurogiramu emahara kana ari kutengeswa kwenguva shoma (Ndira 7)